Vovonana ho an’ny fampandrosoana:MANKASITRAKA NY EZAKA VITAN’NY FILOHAM-PIRENENA -
AccueilRaharaham-pirenenaVovonana ho an’ny fampandrosoana:MANKASITRAKA NY EZAKA VITAN’NY FILOHAM-PIRENENA
23/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mankasitraka ny ezaka vitan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina avokoa ireo mpikambana eo anivon’ny vovonana mivoy ny firaisankina ho amin’ny fampandrosoana ny tanindrazana na ny FFT izay nijoro tao anatin’ny iray volana izao. Ahitana ireo antoko toa ny VPM-MM sy ny Mapar II, ireo loholona, solombavambahoaka, ary ireo minisitra teo aloha sy ankehitriny. Na ireo anisan’ny mpanohitra indrindra ary mahatsapa ny fampandrosoana ilaina ho an’ny firenena ka miara-dia amin’ny tetikasa voizin’ny filoham-pirenena mandritra ny fandraisantsika ny fihaonana an-tampony andiany faha-16 an’ireo firenena miteny amin’ny ampahany na iray manontolo ny teny Frantsay. Namoaka fanambarana ofisialy ireo vovonana miara-dia amin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina na ny FFT omaly tolakandro ny amin’ny fankasitrahana ny ezaka vitan’ny filoham-pirenena izay tao anatin’ny fotoana vitsy dia vitsy. Tery dia tery ny fotoana nikarakarana ny fihaonam-ben’ ny Frankofonia, fa izao tontosa soa aman-tsara izao. “Tsy maintsy tanteraka hatrany ireo fampanantenana nataoko” raha ny hamafisin’ny filoham-pirenena hatrany. Porofo izao ny fandraisantsika ny Frankofonia. Tombony maro no ho sitrahantsika eo amin’ny lafin’ny toekarena, sosialy ary politika. Ireo rehetra ireo no ahafahantsika mampiroborobo ny harin-karena faobe. Bainga goavana hihazakazahantsika mankany amin’ny fampandrosoana indray ny vokatry ny ezaka vita. Taorian’ny Krizy politika maro izay nampanjakain’ny Tetezamita dia miverina mahazo laka indray ny fiainana anatin’ny firenena. Tsy mijanona amin’izay anefa ny tanjona fa ny hanitatra ny fiaraha-miasan’i Madagasikara amin’ireo firenena any ivelany ahafahana mivelatra kokoa ao anatin’ny tsena iraisam-pirenena, tanjona himasoana mandritra ny Frankofonia.
Mitodika amin’i Madagasikara izao tontolo izao…
Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nitondra fiovana lehibe ho an’ny firenena malagasy, indrindra manoloana ny fijerin’izao tontolo izao izay potika tanteraka nandritra ny goragoran’ny Tetezamita sy ireo fitondrana nifandimby. “Fampandrosoana miaraka sy fahatsapana ho tompon’andraikitra hitadiavana ny fandriam-pahalemana, indrindra ho an’ireo firenena mpikambana ao anatin’ny Frankofonia” io no lohahevitra voizina mandritra ny fandraisana ity fihaonam-be andiany faha-16. Tantara hanamarika ireo firenena maro ny fiatrehana ny Frankofonia. Indrindra ho fampiroboroboana hifotony ny lafiny ara-toekarena. Manodidina ny 16% ny harin-karena faobe maneran-tany ny fivondronan’ireo firenena miteny amin’ny ampahany na iray manontolo ny teny Frantsay. Mahatratra 7% ny tahan’ny fitomboan’io salan’isa io ary manodidina ny 14% ny tahiry eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany sy ny angovo nefa manodidina ny 4% fotsiny ny tahan’ireo mponina rehetra miteny amin’ny ampahany na iray manontolo ny teny Frantsay izay. Ireo firenena mpikambana ao anatin’ny Frankofonia ireo dia anisan’ny manana tombondahiny lehibe eo amin’ny lafi-pampandrosoana raha ny fanadihadiana nataon’ny mpahay ara-toekarena Frantsay, Jacques Attali. I Madagasikara no mampiantrano ny Frankofonia andiany faha-16, manana anjara goavana ny olom-pirenena tsirairay, teny atsipy indrindra ho an’ireo faly mitsikera fotsiny. Fanantenana goavana ho an’i Madagasikara ny fiatrehana ny Frankofonia. Ny ho avin’ireo taranaka no banjinina, ary manomboka izao dia miroso mankany amin’ny fampandrosoana isika, ho fampandrosoana maharitra. Ady amin’ny fahantrana no atao fa tsy fifanenjehana tsy hitondra antsika n’aiza n’aiza hoy hatrany ny FFT.
Sambany no hitsidika an’i Madagasikara ny filoha Indianina Ram Nath Kovind taorian’ny taona 2017 nahavoafidy azy ho filoham-pirenena Indianina. Anio no higadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny tenany miaraka amin’ny vadiny ary mpandraharaha indianina maro. ...Tohiny